Igumbi elithokomele, elithokomele, eliyimfihlo e-The City by the Lake - I-Airbnb
Igumbi elithokomele, elithokomele, eliyimfihlo e-The City by the Lake
The Colony, Texas, i-United States
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Lori
Siyakwamukela ekhaya lethu. Sithemba ukuthi uzokujabulela ukuhlala kwakho. Ikhaya lethu lihlehlisiwe, linethezekile futhi lithulile. Sihlala sitholakala, uma kungenjalo mathupha, bese ngocingo uma kukhona okudingayo.
Ngemva kosuku olude lokusebenza noma ukudlala, ikamelo lethu elisanda kubuyekezwa liyakwamukela ngengaphakathi elisha elihlanganisa umatilasi we-Casper memory foam oyindlovukazi omusha kanye nemicamelo engu-2 ethi “My Pillow”.
Indlu yethu yokugezela esanda kubuyekezwa itholakala ngqo ngaphesheya kwehholo. Nethezeka ngaphansi kweshawa emvula ngenkathi ulalele izingoma zakho eziyintandokazi ngesipika sezinyo esiluhlaza sasibhakabhaka. Sicela uqaphele: Indlu yokugezela yezivakashi isetshenziswa izivakashi kuphela ekhaya lethu. Lokhu kungase kuhlanganise abangani abadlulayo kodwa izikhathi ezingu-99%, ngeke wabelane ngaleli gumbi lokugezela.
Ngemva kosuku olude, ziphonse echibini elingemuva kwendlu, ukuvumela isimo sezulu (ehlobo kuphela) kanye/noma zipholele egcekeni ngenkathi ubukele umdlalo wakho we-TV oyintandokazi. Kushisa kakhulu? Hlala ngaphakathi futhi uqoqe umdlalo we-pool.
Sihlala endaweni ethule, ephephile futhi eseduze nayo yonke into. Ngaphansi komgwaqo kukhona ukufinyelela ku-Shoreline hike kanye nomzila wamabhayisikili. Jabulela ukugijima ngenkathi ubukele ukushona kwelanga eLake Lewisville.
Okukhangayo okulandelayo kuseduze:
Igalofu eliphezulu 1.8 miles
I-Grandscape ihlanganisa i-Nebraska Furniture Mart, i-Hard 8 BBQ, i-Rock 'n Brews namanye amamayela angu-2.8
I-Hawaiian Falls 2 miles
IToyota 4.2 miles
I-IKEA 6.5 amamayela
Inkanyezi, Ikhaya leDallas Cowboys 6.9 miles
Isikhumulo sezindiza i-DFW 15 miles
Isikhumulo sezindiza saseDallas Love Field 17 miles
I-AT&T Stadium, i-Turf yasekhaya ye-Dallas Cowboys 26 miles
Sifuna kakhulu ukuthi uzizwe ukhululekile ekhaya lethu. Noma yimiphi imibuzo? Ngicela ukubuza.
Hlola ezinye izinketho ezise- The Colony namaphethelo